စံဝင်းချို Daily Hope Principle for Personal Change: Strongholds
“အမျက် မပြေဘဲ နေမဝင်စေနှင့်။ မာရ်နတ်ကို အခွင့်မပေးကြနှင့်။” (ဧ ၄း၂၇)
သင်၏အသက်တာတွင်၊ မာရ်နတ်ကိုခြေကုပ်ပေးမိလျင်၊ သူကအမာခံနယ်မြေကိုယူသည်။ ဘာအဓိပါယ်ဘဲ? သင်သည်စာတန်၏ထိန်းချုပ်မှုကို သင်အသက်တာတွင်နေရာအနည်းငယ်ကိုပေးမိလျှင်၊ သူကအမြန် အကုန် လုံးကိုယူမည်။သင်ကအသက်တာတွင်ခြေကုပ်သူကိုပေးသည်၊ သူကအမာခံနယ်မြေပြုလုပ်လိုက်သည်။
ကျွန်တော်ဒီလိုရှင်းလင်းဖေါ်ပြမည်၊ D-Day နေ့ရက်တွင်၊ မဟာမိတ်ပြုထားသောတပ်များသည် Normandy ကမ်းခြေတွင် ဆင်းကြသည်၊ အတိမ်းအစောင်း မခံသောအချိန်ဖြစ်သည်။ သူတို့ကမ်းခြေသို့တက်၍ ခြေကုပ် ယူထားသောတပ်ကိုထူထောင်သည်၊ ဤအရာက၊ ကမ်းခြေကို ခြေကုပ်ယူပြီး တစ်ထောက်နားသည့်စခန်း၊ အဖြစ်အ သုံးပြုပြီး၊ နောက်ထပ်လူအင်အားနှင့်လက်နက်ကရိယာ စစ်တိုက်ရန် စုစောင်းနိုင်သည်။ ထိုခြေကုပ်သည်သေးငယ်သည်၊ သို့သော် မဟာမိတ်တပ်များသည်၊ ထိုခြေကုပ်မှ ကုန်းတွင်းပိုင်းကို ၀င်ရောက်ပြီး လုံလဖြင့် ပြင်သစ်နိုင်ငံ ကိုလွတ်မြောက်စေသည်။
သို့သော်လည်း စာတန်သည် သင်၏လွတ်မြောက်မှုအတွက် ဆောင်ရွက်ခြင်းလုံးဝမရှိပါ။ သူကခြေကုပ်ယူပြီး ထူထောင်ခြင်းဖြင့် သင်၏အသက်တာကို ပို၍ပို၍ယူလိုသည်။ သူကအပြစ်၏အပိုင်းအခြားနယ်ကို ရလျှင်၊ သူကခြေကုပ်ကို အမာခံနယ်မြေသို့ပြောင်းလိုက်သည်၊ ထိုအခါသင်၏အသက်တာကိုပြန်ယူရန် ခက်ခဲလာမည်။
စာတန်က သင်၏အသက်တာတွင် ခြေကုပ်ကိုဘယ်လိုရသလဲ? ဧဖက် ၄း၂၇တွင်၊ ဥပမာအားဖြင့် ဒေါသဖြစ်စေသည်၊ သို့သော်လည်း ထိုအရာသည် တစ်စုံတစ်ရာ ငြင်းပယ်သော စိတ်ခံစားခြင်းဖြစ်သည်။ သင်၏ အသက်တာကို ပူပင်စရာ ဖြည့်လျှင်၊ စာတန်ကခြေကုပ်ရမည်။ သင်၏အသက်တာကို မကျေမချမ်းမှု ဖြည့်လျှင်။ စာတန်ကခြေကုပ်ရမည်။ သင်က အပြစ်ရှိခြင်းကို အရှက်သို့ပြောင်းလျှင် စာတန်က သင်၏အသက်တာတွင် ခြေကုပ်ရသည်။
တမန်တော်ရှင်ပေါလုပြောသည်မှာ ငြင်းပယ်သော စိတ်ခံစားခြင်းနှင့်အကောင်းဆုံး အပေးအယူလုပ်ရန် မှာချက်ချင်းဖြစ်သည်။ သူပြောသည်မှာ “အမျက် မပြေဘဲ နေမဝင်စေနှင့်။ မာရ်နတ်ကို အခွင့်မပေးကြနှင့်။” (ဧ ၄း၂၇) ကောင်းသောနည်းဖြင့်၊ အမှန်ဖြစ်ရန်၊ သင်ရွေးချယ်ပါ။
သို့မဟုတ်လျှင်၊ ငြင်းပယ်သော စိတ်ခံစားခြင်းသည် သင်၏စိတ်နှလုံးတွင် အခြေအနေ ပိုဆိုးလာပြီး စာတန်ကို သင်၏အသက်တာတွင် ခြေကုပ် တည်ထောငရန်အခွင့်အရေးပေးခြင်းဖြစ်မည်။
Tuesday July 27, 2011 12:00 AM Posted by Rick Warren